Iziphumo ezingalindelekanga zemivuzo yokunyanzeliswa yenyuka
Olutsha olutsha "Ukuphakamisa umvuzo" lugubungela ilizwe ngoku kutshanje. E-California, abameli babedlulisa isivumelwano sokwandisa umvuzo ukuya kwi-15 / i-yure ngo-2022. U-Seattle wadlulisela ibhilikhwe efanayo ngo-2015, kwaye ubungqina bubonisa umphumo ongenakwenzeka wokunyuka okunjalo. Ngoko, kutheni i-conservatives ichasa umvuzo omncinci ophezulu?
Okokuqala, Ngubani Ofumana Ukuhlawula Umvuzo Omncinci?
Ukuqala ukucinga kwabo bafuna ukuphakamisa umvuzo omncinci kukuba aba bantu bafuna umvuzo wabo omncinci ophakanyisiweyo.
Kodwa ke le mi sebenzi ithetha ntoni? Iveki ndaphendukela kwishumi elinesibhozo ndaqalisa umsebenzi wam wokuqala. Kwakumsebenzi oqaqambileyo owabandakanyeka ukuhamba ngaphandle komthengisi omkhulu kwihlabathi, ukuqokelela izigulane, kwaye uphinde ubangele ngaphakathi. Ngamanye amaxesha, ndiza kunceda abantu balayishe izinto kwiimoto zabo, nabo. Ngokubhengezwa ngokugcwele, lo mthengisi wandihlawulela ngamashumi angama-40 ngaphezulu kwimivuzo encinci ukuqala. Ndadibana nabanye abaninzi abantu bam ubudala apha, naye. Sonke, sonke sahamba esikolweni emini kwaye sisebenza ebusuku okanye ngeveki. Owe, kwaye umama wayenomsebenzi wesikhathi sendawo kwindawo enye ukuba enze imali encinane.
Kwishumi elinesithandathu, ndandingenayo iindleko. Nangona amaxesha atshintsha xa ndikholelwa kuMama we-MTV, ndingenalo nentsapho yokuxhasa. Lo msebenzi omncinci weholide wenzelwe mna. Kwaye kwakuthetha ukuba umama osele esebenze omnye umsebenzi ogxininisekile kwaye wayefuna ukwenza imali encinane kwicala elenza umsebenzi ophantsi kancinci wecashier ukusebenza iiyure ezimbalwa ngeveki.
Imisebenzi ephantsi yomvuzo ijoliswe ukuba ibe yinqanaba lokungena. Uqala ngasezantsi, kwaye emva kokusebenza kanzima, qalisa ukwenza imali eninzi. Imisebenzi engaphantsi kwemivuzo ayijoliswe ukuba ibe yimisebenzi yokuphila. Ngokuqinisekileyo azinenjongo yokuba bakwazi ukuxhasa intsapho epheleleyo. Ewe, zonke iimeko zihlukile. Kwaye kuqoqosho lwangoku, le mi sebenzi kunzima ukuza ngamanye amaxesha.
Umvuzo Omncinci oPhezulu oMgangatho oNcinane, Imbalwa emisebenzi yeMvuzo
Inkqubo esekelwe kwenkqubo kunye nesimo sengqondo sokunyusa umvuzo omncinci kulula ukwenza. Oo, ngoko ke ningacingi ukuba abasebenzi baseMerika bafanelwe ukuba baphile ngokukhululekile ukuba basebenze ixesha elipheleleyo ?. Yiloo nto aya kuthetha ngayo. Kodwa i-economics ayilula. Akukona nje ukuba umvuzo omncinci ukongezwa ngu-25% kwaye akukho nto iyakushintsha. Enyanisweni, yonke into iyatshintsha.
Ukuqala, imisebenzi ibe yincinci. Yenza into ethe xaxa kwaye ufumane ngaphantsi kwayo. Siyakwamkelwa kwi-Economics 101. Imisebenzi emininzi yemali esezantsi ayimisebenzi ebalulekileyo (yithi, ukunyusa amabhugi ukusuka kwindawo yokupaka) kunye nokwenza ixabiso elininzi lenze kube nzima ngakumbi. Ukongeza kuloo mbulali-mbulala-mva nje waziwa ngokuba yi-Obamacare kwaye ngokukhawuleza awuyi kuba nexhala malunga nemisebenzi embalwa yomvuzo kuba kuya kuba neyimbalwa kakhulu eseleyo. Abaqeshi bafuna ukuhlawula umqeshwa omnye obalaseleyo we-16 / hr ngeenzuzo kunokuba bakhokhe abasebenzi abangenamava angama-9 abangenamava angenamava kunye neenzuzo. Umphumo wemnxeba yimisebenzi embalwa njengoko imisebenzi ihlanganiswa kwiindawo ezimbalwa kunye nezimbalwa. Imigaqo-nkqubo yezochasayo eyaqala ngo-2009 iye yabonisa le ngongoma njengoko ngo-2013 bekukho abantu abayizigidi ezi-2 abambalwa abasebenza ngaphaya kweminyaka emine ngaphambili, kunye nezinga eliphezulu kakhulu lokungabikho kwemisebenzi elisezingeni elidala labantu abadala.
Ukwanda kwenani lomvuzo osisigxina kunye neendleko zokuhlala eMississippi kuyahluke kakhulu kunokwiNew York City. Ukunyuka kwamaholo omncinci wenkxaso-mali kungaxhomekekanga kwishishini kwilizwe apho zonke izinto zithengela ngaphantsi, kodwa ngoku iindleko zabasebenzi zithengisa ngakumbi. Yingakho i-conservatives inokukhetha indlela yokusekwa kwelizwe njengoko ubungakanani obufanayo abuhambisani nonke.
Iindleko eziPhezulu ziCima iNzuzo kwiNgeniso
Kungekuphela nje ukuphakamisa umvuzo omncinci wokunciphisa inani lemisebenzi ekhoyo, kodwa mhlawumbi bekungaphumeleli ukwenza ubomi "bubebizi" kubasebenzi ngokukhawuleza. Cinga ukuba wonke umthengisi, ishishini elincinci, isitishi segesi, kunye nokutya okukhawuleza kunye nokudibanisa i-pizza baphoqelelwe ukuba bandise ukuhlawulwa kwabo babeselula kakhulu, abakhulile bekholeji, ixesha lesithuba, kunye nabasebenzi beesibini ngama-25%. Ngaba bahamba nje "oh okay" kwaye bangenzi nto yokwenza loo nto?
Ewe, ayenjalo. Banciphisa inani leenhloko zabasebenzi (mhlawumbi bengenzi ukuba imeko zabo zibe "bhetele") okanye bandise iindleko zemveliso okanye inkonzo yabo. Ngako-ke, ngelixa unyuse umvuzo omncinci wabasebenzi (kwanokuba ucinga ukuba bangabasebenzi abahluphekayo) akunakunzima kuba ixabiso lemveliso nganye eceba ukuyithenga kwabanye abathengisi, amajoyina okutya okukhawulezayo kunye ne-shishini elincinci livele lihlawule ukwenyuka kwintlawulo. Ekupheleni kosuku, ixabiso le dollar libuthathaka kwaye ukukwazi ukuthenga izinto ezininzi kuya kuba kubi kakhulu .
I-Middle-Class Hit Hardest
Ama-dominoes ahlala ewa, kwaye ngoku ajika ukuya kwinqanaba eliphakathi. Ukuba umvuzo omncinci uphuhlisiwe-ngakumbi nakubantwana abancinci nabesibini abaqeshwe ngabaqeshwa kunye nabathathe umhlala-phantsi abangenayo ukunyuka-akuthethi ukuba abaqeshi bayakuphakamisa umvuzo wabo basebenzi bebakala abaphakathi. msebenzi. Kodwa nje ngokuba amandla okuthenga edoli ayancipha ngamanani aphezulu kubasebenzi abancinci bemvuzo, kwandiswa kwinqanaba eliphakathi abathenga iimpahla kunye neenkonzo ezifanayo. Kodwa ngokungafani nabasebenzi abasebenzisa umvuzo ophantsi, udidi oluphakathi alufumani ngokunyuka ukunyuka kwama-25% ekuhlawuleleni ukuze kuthathe iindleko zamanani aphezulu. Ekugqibeleni, umgaqo-nkqubo onokuzivelela ungabangela ukuqhutyelwa phambili kwinqanaba eliphakathi kunye namashishini amancinci, ngelixa besenza nto ingabancedi abo babenjongo yokuncedisa umthetho.
I-20 e-Top Conservatives ekulandeleni nge-Twitter
Yintoni "i-Conservatarian" Njalo?
Inzala kaLaura Elizabeth Ingalls noAlmanzo James Wilder
I-Purdue University GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
AmaHyda akha ubuso be-Starry Bull
Iingoma ezi-10 eziphezulu ze-Flashback Road zabaFaki beMculo yobuKristu
Ezi zi-10 eziqingqiweyo ze-Muhammad Ali Quotes Ngaba i-Knockout iyonke
Ngaba 'i-Well Que' idinga i-Subjunctive?